Qabashada Hal tifaftire sawir ah, oo loogu talagalay Apple Silicon | Waxaan ka socdaa mac
Qabashada Hal tifaftire sawir ah, oo loogu talagalay Apple Silicon
Qabsashada Koowaad waa tifaftire sawir caan ah oo ka mid ah xirfadleyda qaybta. Aad u awood badan, fududahay in la isticmaalo, isla markaana si cad diiradda loo saaro sawir qaadayaasha, ha noqdaan xirfadle ama hiwaayad. Iyo sidee bay u noqon kartaa si kale, iyada oo qaabkeedii ugu dambeeyay aad ku soo gashid tareenka xawaaraha sare leh ee loo yaqaan Apple Silicon.
Iyo sida iska cad, isbarbardhiga waa wax xun. Horumariyaha wuxuu xaqiijinayaa in howlaha culus, kororka xawaaraha uu yahay kan 100% on Mac leh processor-ka M1 marka la barbar dhigo isla shaqada ka socota Intel Mac. Waqtigan xaadirka ah, mar dambe lama yaabin.
Capture One, oo ah codsi caan ah oo tafatirka sawirada loogu talagalay Mac, ayaa hadda loo habeeyay Silicon Apple. Tani waxay ka dhigan tahay in barnaamijku asal ahaan ka socdo Apple Silicon Macs sida 24-inch iMac, MacBook Pro M1, Macbook Air M1, iyo Mac mini M1.
Horumariyaha ayaa ku andacoonaya in ku sii socoshada Qabashada Mid ka mid ah Mac M1 ay bixiso waxqabad aad u ballaaran oo ka sarreeya Intel-yada ku shaqeeya Mac-yada, oo ay ku jiraan horumarin u gudbi karta waxqabadka 100%. daabacaad iyo maxkamadaynta oo ah sawirro aad u dhib badan oo culus.
Ku Qabashada Qabashada Mid ka mid ah Mac-da leh processor-ka M1 ayaa ka dhigaysa soo dejinta sawirro cusub Soo-dejiye Hor-u-socod ah illaa 2x dhakhso ah, halka maaraynta hantidaas Catalogs iyo Albums-ka ay hadda tahay neecaw. 50% dhakhso badan. Ku cadayashada tifaftirka cadayga qaabku wuu ka jilicsan yahay sidii hore abidkii loo yaqaan 'Mac M1', halka aad wax ka beddeli karto aaladaha muhiimka ah sida Dalagyada iyo Wareegtada laba jeer xawaaraha.
rafael ortaMaamulaha shirkadda Capture One, wuxuu sharraxay inay qorsheynayaan inay dib-u-qaabeeyaan habka ay u shaqeeyaan dhammaan barnaamijku waxayna ka wada hadleen sida ay ugu habboonaan karaan iyagoo ku saleynaya qalabka cusub. Isla markii M1 lagu dhawaaqay sanadkii hore, waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan soo dejinta koodhka si ay uga faa'iidaystaan ​​fursadaha cusub ee ay soo bandhigtay processor-ka cusub ee Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Qabashada Hal tifaftire sawir ah, oo loogu talagalay Apple Silicon
Sida ay sheegayaan wararka xanta ah, AssistiveTouch on Apple Watch waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo muraayadaha Apple
Xaruntii ugu horreysay ee xogta Apple ku taal Shiinaha ayaa si rasmi ah u bilaabeysa howlaheeda